Twill Factory - China Twill Abenzi, abahlinzeki
Ukunamathela embonweni wokuthi "Ukudala imikhiqizo ephezulu kakhulu ebangeni nokuhola abalingani nabantu namuhla abavela kuwo wonke umhlaba", sihlala sibeka isifiso sabathengi kuqala kuTwill,,,, Ukwaneliseka kweKhasimende kuyinjongo yethu eyinhloko. Samukela wena ukusungula maqondana ibhizinisi nathi. Ngeminye imininingwane, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi. Inqubekela phambili yethu incike emikhiqizweni esezingeni eliphezulu, amathalente amnandi nokuqina okuqhubekayo kobuchwepheshe kweTwill, Ulwazi olusebenzayo emkhakheni lusisizile sakha ubudlelwano obuqinile namakhasimende nabalingani bethu emakethe yasekhaya neyamazwe omhlaba. Sekuyiminyaka, imikhiqizo yethu kanye nezixazululo zithunyelwe emazweni angaphezu kwe-15 emhlabeni futhi zisetshenziswe kakhulu ngamakhasimende.